Izimo zokubhalisa - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Faka isicelo manjeInqubo Yokubhalisa
Izinsizakalo zabafundiInqubo Yokubhalisa
Khumbula ukuthi amakilasi ethu mancane, ngakho-ke izindawo ezikhona zilinganiselwe. Sincoma ukuthi wenze ukubhaliswa kwakho ngokushesha ukuvikela indawo yakho.
Gcwalisa amafomu okubhalisa kwi-BLI online
Gcwalisa bese uhambisa ifomu ngolwazi oluphelele nolunembile. Lapho ugcwalisa isicelo sakho, kufanele ulayishe ikhophi evumelekile ye-ID yamazwe ngamazwe (njengepasipoti noma Ilayisensi Yokushayela) Uma ungumntwana, umzali noma umnakekeli kufanele asayine ifomu.
Thola i-imeyili yokuqinisekisa
Uma sesithole ukubhaliswa kwakho sizoqinisekisa ukuthi izinsizakalo ozicelile ziyatholakala ngezinsuku ezikhethiwe.
Yenza inkokhelo yakho
Uma ukubhaliswa kwakho sekucutshunguliwe sizokuthumelela ikhophi ye-invoyisi yakho nge-imeyili. Udinga ukukhokha u-30% wezindleko eziphelele zohlelo. Omunye u-70% kufanele ukhokhelwe kungakapheli amasonto amabili ngaphambi kokufika kwakho e-Canada ngenkokhelo eyodwa noma izitolimende zanyanga zonke. Ungenza inkokhelo yakho ngokudluliswa kwebhange lamazwe ngamazwe, ikhadi lesikweletu noma ikhadi lasebhange. Singase sizamukele ezinye izindlela, sicela usithinte ukuze uthole imininingwane eyengeziwe.
Thumela ubufakazi bokukhokha
Lapho usuyikhokhile, sicela uthumele ubufakazi kulowo muntu ocubungula ukubhaliswa kwakho.
Thola incwadi yakho yokwamukela
Lapho inkokhelo isiqediwe futhi yaqinisekiswa, sizokhipha incwadi yakho yokwamukela bese sikuthumelela ikhophi nge-imeyili.